Everest Pati – Page 305 – Best Nepali News Portal From Nepal
०७७ आषाढ ३१ गते बुधबार ई. स. २०२० जुलाई १५ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार…
कपाल बाक्लो, कालो र चम्किलो बनाउन…
अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । यो प्रकृतिले निःशुल्क दिएको बहुगुणी फल पनि हो । अमला नियमित खानाले आँखाको ज्याति बढाउँछ, दिमाग तेज गराउँछ र छालाका विभिन्न समस्याबाट टाढा राख्छ । यति मात्रै होइन, अमलाका अन्य धेरै फाइदाहरु पनिछन्ः…
पढेको सम्झिने १० सुत्रहरु !
१.अन्डरलाइन गरेर पढ्ने अन्डरलाइन गरेर पढ्ने कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अर्को पटक आफुलाई चासो लागेको विषय खोज्न सजिलो हुन्छ । परीक्षा दिने केही दिनअघि अन्डरलाइन गरेको विषय दोहो¥याउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । २.…
सावधान ! यी ६ प्रकारका पुरुष हुन्छन् धोकेवाज
एजेन्सी । मानिसहरु सम्बन्धमा आएपछि मात्र चिनिन्छ । सामान्य चिनजान वा सामाजिक सञ्जालका कुराकानीकै भरमा मान्छे चिन्न गाह्रो हुन्छ । कुन मान्छे सज्जन छ र कुन मान्छे गलत नियतको भन्ने कुरा बुझ्न निक्कै कठिन छ । यहाँ धोकेबाझ प्रकृतिका पुरुषका…
एजेन्सी । दूध पिउँदा शरीरलाई अनेकौं फाइदा हुन्छन । यसमा भएको क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र भिटामिनले हड्डी बलियो बनाउँछ । तर दूधसँग गलत खानेकुरा खानुभयो भने त्यसले विषको काम गर्छ । दूधसँग के के खानु हुदैन त रु यहाँ उल्लेख गरिएको छ, सुन्तला,…
एजेन्सी । स्वस्थ जीवनका लागि कम्तीमा पनि सात–आठ घन्टाको निद्रा जरुरी हुन्छ । निद्रा नपुग्दा पाचन प्रणालीदेखि लिएर सौन्दर्यमा समेत ह्रास आउछ । त्यति मात्र होइन, निद्रा पुगेन भने मानसिक तथा शारीरिक ‘स्ट्रेस’ पनि बढ्छ । यदि तपाईलाई निद्रा…
एजेन्सी । पछिल्लो केहि समय यता विवाह लामो समयसम्म टिकाउनु निकै मुस्किल जस्तै भइसकेको छ धेरैलाई । पति र पत्नीबीचको सम्बन्धपनि त्यति धेरै गहिरो हुँदैन । भनिन्छ जीवनसाथी यदि राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग बन्छ । तर यहि कुरा विग्रीयो भने जीवन नर्क…
काठमाडौं । पेट बढी नै लागेमा मुटुसम्बन्धी रोग, चिनी रोग, उच्च रक्तचापदेखि क्यान्सरसम्म लाग्ने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन काँक्राको सहयोगले पेट घटाउन सकिन्छः विकार हटाउँछ काँक्राको बियाँमा शरीरमा जम्मा भएका विकारलाई शरीरबाहिर…
नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज ६ बजेदेखि सांगीतिक कार्यक्रम हुँदै
काठमाडौँ । ‘आइएमई पे’ले नयाँ वर्षका अवसरमा सामाजिक सन्देश सहितको सा‌ंगीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। आइतबार साँझ छ बजेदेखि नौं बजेसम्म कम्पनीको आधिकारिक फेसबुक पेज र यूट्युव च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएको हो। नयाँ वर्ष…
बलिवुडका चर्चित निर्माताका दुवै छोरीमा कोरोना संक्रमण
मुम्बई । बलिवुडका चर्चित फिल्म निर्माता करीम मोरनीका दुवै छोरी कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।मुम्बईको जुहूमा बस्ने करीमका दुवै छोरी जोआ मोरानी र शजा मोरानीको कोरोना टेस्ट पोजेटिभ आएपछि जुहू इलाकामा नै हडकम्प मच्चिएको थियो । मुम्बईको…
काठमाडौं । वैशाख ३ सम्म धैर्य हुन सर्वसाधारणलाई प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अपिल गरेका छन्। फेसबुकमार्फत् उनले वैशाख ३ गतेपछि सीमित मात्रामा ठाउँ हेरेर आवातजावात खोल्ने सकिने उल्लेख गरेका छन्। ‘३ गतेसम्म जो जहाँ छौं त्यहीँ…
Previous 1 … 303 304 305 306 307 … 359 Next